Theresa May oo si kulul u cambaareysay madaxweyne Trump - BBC News Somali
15 Luulyo 2019
Image caption Alexandria Ocasio-Cortez (bidix), Rashida Tlaib (dhexda) iyo Ayanna Pressley (Midigta)
Ra'isalwasaaraha Britain Theresa May ayaa cambaareysay hadalka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu haweenka ka tirsan aqalka Koongreska Mareykanaka oo aan ahayn caddaan uu ku yiri 'Dib u laabto'.
Raisalwasaraaha Britain ee xilka ka sii tageyso ayaa hadalka Mr Trump ku tilmaantay 'mid aan la qabali karin', sida ay sheegtay afhayeen u hadashay Mrs May.
Madaxweyne Trump waxaa uu yiri haweenka "asal ahaan ka soo jeedo waddama baaba' ah oo ay dowlado ka jirin".
Mrs May ayaa bishi June Ra'isal wasaaranimada Britain iska casishay kaddib marki uu baarlamaanka Ingiriiska uu ka hor istaagay inuu u meel mariyo heshiiska ka bixitaanka midowqga yurub.
Laba Musharraxa oo ka soo jeedda xisbiga muxaafidka ayaa haatan loollan adag ugu jirto sidi ay u beddeli lahaayeen ra'sal wasaaraha xilka iska casishay.
Ms Pelosi qoraalka Trump waxay ku tilmaantay 'Isir neceyb'
Boggeeda Tweetarka waxay ku qortay "Donald Trump afar haween ah oo ka tirsan aqalka Koongreska mareykanka oo uu yiri dalkooda ha ku laabtaana, iyada oo hadalkiisa xillligi ololaha doorashada uu ahaa "Mareykanka waxaan doonayaa inaan markale kale ka dhigo ka dunida ugu awoodda badan" ma aha laba iskeeneyso balse wuxuu doonayaa inuu Mareykanka uu ka dhigo dal ay markale caddaanka oo keli ah leeyihiin. Kala duwanaashaheenna waa adkaashaheenna, midnimadeennuna awood ayey noo yeeleysaa."
Ms Talib oo ka tirsan aqalka koongresska oo laga soo doorto degmada 13aad ee Michigan, waxay Tweetarkeeda ku soo qortay iyada oo Mr Trump u jawaabeyso "Waxaan doonayaa inaan u jawaabo ficillada sharci darrada iyo guuldaradda madaxweynaha? Halis ayuu ku jiraa, Fikirkiisa aadka u liita ayuuna halis kala kulmayaa, wuxuuna u baahan yahay in la joojiyo."
Ms Ocasio-Cortez waxay iyaduna boggeeda Tweetarka ku soo qortay: "Haddii uu ixtiraami waayey dadka Mareykanka ee na doortay, annaguna ma aqbaleyno mana kaa cabsaneyso."
Mr Trump farriimahiisa Tweetarka uu ku weeraray haween ka tirsan Congress-ka ku eedeeyay inay haweenkan "si joogto ah" u dhaliilaan isaga iyo waddanka Mareykankaba.